Delete.bg dia mandefa plugin ho an'ny Photoshop hanala ny ambadika | Famoronana an-tserasera
Ity plugin Remov.bg ity dia afaka manala ny ambadiky ny sary ao amin'ny Photoshop
Raha efa nanao izany isika fanatsarana Photoshop fantatra ao amin'ny faritra mampanjavozavo ny mombamomba na mampiasa ny fifantenana na dia amin'ny volo izay sarotra ny manamarika, Delete.bg dia plugin vaovao natao ho an'ity programa ity izay manala ny ao ambadika haingana.
Plugin iray izay manamora kokoa ny raharaha tsy maintsy lazaina fa mihamora sy mihamora io ampiasao ny safidin'i Adobe Sensei marani-tsaina noho io antony io; aza very ity lesona ity izay mampiseho anao tsikelikely ny fomba fanaovana azy amin'ny tanana. Marina fa ity plugin ity dia azo antoka fa hanararaotra ireo fanatsarana ireo mba hanaovana majika eo imasontsika.
Raha ny marina esory.bg dia tranonkala iray ahafahantsika mampakatra sary haingana esory ny sary avy amin'ny sary. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manova ny lasa ho an'ny iray hafa ary manahafana fa any an-kafa isika. Efa fantatsika ny majika mifandray amin'ny famolavolana sary, noho izany ity tranonkala ity dia manamora ny zavatra rehetra ho antsika.
Ary raha mandraka androany dia tranokala noho ireo antony ireo dia namoaka plugin ho an'ny Photoshop tenany ihany izy. Fanitarana ho an'ity programa ity Mampiavaka azy ny fahalalana ny fomba hiatrehana ireo tsy fahalavorariana ireo izay mazàna dia manana ny aloky ny volo rehefa manandrana mifidy ny any ambadika isika.
Tafiditra ao amin'ny apetaho ny fahafaha-mitantana ireo sosona ireo tsirairay ho an'ny feo maitso sy ny sisiny mifanohitra ambany. Raha te hampiasa ny fanitarana dia izahay andao mankany amin'ity rohy ity Raha hanaraka ny dingana sy ny fisoratana anarana amin'ny tranonkala, ampidino izany ary apetraho ny API KEY hahafahana mifehy ny tenantsika amin'ny plugin.
Un plugin izay mandeha tsara ary mamporisika anao hampiasa amin'ny Photoshop raha manana ny fahafaha-manao ianao, na dia manana ny kinova an-tranonkala foana aza izahay hialana amin'ny olana rehefa tsy afaka misafidy ny hiditra amin'ilay programa famolavolana lehibe izay fantatsika rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ity plugin Remov.bg ity dia afaka manala ny ambadiky ny sary ao amin'ny Photoshop
PhotoGIMP manova ny GIMP ho Photoshop saika mahagaga
Milton Glaser dia nandao antsika tamin'ny faha-91 taonany